I-akhawunti yami - Print Peppermint
Joyina Amathiphu Edizayini Nezaphulelo Ezikhethekile
Uyini u-6 + 4?
Thola izaphulelo & okunikezwa imfihlo!
Joyina i-newsletter yethu bese ukhipha u- $ 10 kwi-oda lakho lokuqala.
Imininingwane 2022 - Print Peppermint Inc.
Inqubomgomo Yethu Yekhukhi
Lewebhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa ulwazi lwakho. Sizocabanga ukuthi ulungile ngalokhu, kodwa ungakhetha ukuphuma uma ufisa.YamukelaYenqaba Funda kabanzi
Amakhukhi asebenzayo asiza ukwenza imisebenzi ethile efana nokwabelana ngokuqukethwe yiwebhusayithi kuzinkundla zokuxhumana, ukuqoqa okubuyisa emuva, nezinye izinto ezivela eceleni.
Amakhukhi wokwenza umsebenzi asetshenziselwa ukuqonda nokuhlaziya izinkomba zomsebenzi osemqoka zewebhusayithi ezisiza ekuletheni ulwazi olungcono lomsebenzisi kuzivakashi.
Amakhukhi wokuhlaziya asetshenziselwa ukuqonda ukuthi izivakashi zixhumana kanjani newebhusayithi. Lawo makhukhi asiza ukuhlinzeka ngemininingwane kuma-metric inani labavakashi, isilinganiso sokugibela, umthombo wethrafikhi, njll.
Amakhukhi ezikhangiso asetshenziselwa ukuhlinzeka izivakashi ngemikhangiso efanelekile kanye nemikhankaso yokuthengisa. Lawo makhukhi alandelela izivakashi kuwo wonke amawebhusayithi futhi aqoqa imininingwane ukunikeza izikhangiso ezenziwe ngezifiso.
Amanye amakhukhi angahlukaniswanga yilawo ahlaziywa futhi angakahlukaniswa esigabeni kuze kube manje.
Londoloza Inqola Yakho
Faka isihloko senqola
Yabelana Ngenqola Yakho
Ngena ngemvume kuqala ukuze ulondoloze ikalishi